ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲ - Hello Sayarwon
Update Date ဒီဇင်ဘာ 30, 2020 .2mins read
အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခြေအနေတွေကလည်း ကလေးဘဝကထက် ခက်ခဲလာပါတယ်။ ကလေးတုန်းက ဘယ်လိုနေနေ သင့်တော်ပေမယ့် အရွယ်ရောက်လာရင် အနေအထိုင်ကတော်တော်လေးဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုနေနေဖေဖေမေမေတို့မျက်စိထဲမှ အမြင်မတော်တာတွေကြုံတဲ့အခါများဆိုရင် အလိုလိုနေရင်းကို စိတ်ညစ်နေရရောနော်။ ဒီမှာတော့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။
အရွယ်ရောက်လာသူတစ်ယောက် ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေ
အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေပါ ခံစားရပါတယ်။
ကလေးဘဝက မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်က စတင်ပြောင်းလဲလာပြီ။ အရင်က အင်္ကျီပဲကောက်စွပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေနေပြီကို အတွင်းခံထပ်တိုးဝတ်ရတာက စိတ်ညစ်စရာဖြစ်လာပြီ။
ရင်သားတွေစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာသလို ခန္ာါကိုယ်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို့ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ အစ်ကိုတွေ၊မောင်တွေနဲ့ ကစားရတာကအရင်လောက် ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူး။ဘောလုံးကန်ရတာကြိုက်ပေမယ့်တောင်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရောကစားရတာတစ်မျိုးဖြစ်လို့ သိပ်မကစားဖြစ်တော့ဘူး။
သူငယ်ချင်းချင်းကြားမှာလည်း ဆက်ဆံရတာတစ်မျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ စကားအမှားမခံတာက သူတို့ရော၊ ကိုယ်တိုင်မှာရောဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်။
စိတ်တည်ငြိမ်နိုင်စွမ်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းသိပ်မကောင်းတော့သလိုပဲ။ ဘာတွေကို စိတ်ရှုပ်နေမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။
လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာတဲ့ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ အရင်လောက်အဆင်မပြေချင်တော့ဘူး။ ရှက်သလိုကြောက်သလိုဖြစ်လာတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အချို့နေရာတွေမှာ အမွေးအမျှင်တွေထွက်လာတယ်။
မိန်းမကိုယ်ကနေ အကျိအချွဲလေးတွေ စဆင်းလာပြီ။
ရာသီသွေးစပေါ်ပြီ။ လစဉ်ပြဿနာကြောင့် စိတ်ညစ်ရတဲ့ အချိန်တွေကိုစကြုံရပြီလေ။
ဒါတွေက တကယ်တော့လည်း စိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ အညီပြောင်းလဲလာတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပါ။ အချို့သောအရာတွေက လက်မခံချင်ရင်တောင် သူ့အလိုလိုရောက်လာမှာဆိုတော့ ကိုယ်ဘက်ကလုပ်နိုင်မှာက ဒီအခက်အခဲတွေကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်ဖို့ပါ။
အရင်ဆုံးက ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဆိုတာကို အရင်ဆုံးလက်ခံဖို့လိုပါမယ်။ မဖြစ်မနေလက်ခံရမယ့် ကိစ္စကို အကောင်းဆုံးကျော်လွှားဖို့က အတွေ့အကြုံရှိသူတွေထံကနေ အကူအညီရယူဖို့လိုပါမယ်။ ကိုယ့်မှာ အစ်မမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှ အကောင်းဆုံးတိုင်ပင်ဖော်ဖြစ်တဲ့မေမေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။ပြောင်းလဲလာတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပါ အကောင်းဆုံးတိုင်ပင်ဖော်ဖြစ်တဲ့မေမေ့ကို တစ်နေ့တာမှာ ခံစားရသမျှကို ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်လို့ အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်တွေရယူတာကနေစပါ။
ပြောင်းလဲလာတဲ့ခန္ဓါကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မယ့် အဝတ်အစားအတွက်ကမေမေဆင်ပေးသမျှကိုဝတ်လိုက်ပါ။
ခန္ဓါကိုယ်မှာပေါက်လာတဲ့ အမွေးအမျှင်တွေအတွက် ဖယ်ရှားဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။
အနံ့အသက်ဆိုးအတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ပိုဂရုစိုက်လို့ လိုအပ်မယ့် အသုံးအဆောင်တွေကို အသုံးပြုဖို့လုပ်ပါ။
ရာသီလာတာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကတော့ လစဉ်သုံးပစ္စည်းအသုံးပြုနည်းကိုမေမေ့ဆီကနေ သင်ယူပါ။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဓမ္မတာစတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ အားအင်ကုန်ခမ်းတာတွေ အားနည်းတာတွေ ခံစားရတာအတွက် ဒီကာလမှာ အာဟာရပြည့်ဝအောင် သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ပရိုတင်း၊ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်တွေပြည့်ယစွာ ပါဝင်နေတဲ့ အစားအစာတွေကို ပြင်ဆင်ပေးပါ။
အသားအရေပြောင်းလဲမှု နဲ့ ဝက်ခြံအတွက်ကတော့ လိုအပ်တဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
လှပကြော့ရှင်းတဲ့ အသွင်အပြင်တစ်ခုဆီကို ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်စေဖို့အတွက် အခုပြောခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေက အသုံးဝင်မှာပါ။
Parenting children through pubertyhttps://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/Parenting-children-through-puberty
Accessed Date 17 May 2019
Short Children and Normal Growthhttps://www.verywellfamily.com/the-short-child-2633629
Puberty - boy changes, girl changeshttp://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetailsKids.aspx?p=335&np=289&id=1774
ဆယ်ကျော်သက်တို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သော သွားရည်စာများ
ဘေဘီလေးတွေဟာ အသက် တစ်နှစ်တာမှာ ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ လျင်လျင်မြန်မြန် ဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ပထမနှစ်မှာဘာတွေ ဖွံ့ဖြိုးသလဲ။
ကလေးငယ်, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 18, 2021 .3mins read
လေ့လာမှုတွေအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မေမေက ဓာတ်မတည့်တာကို ခံစားရမယ်ဆိုရင် မွေးလာမယ့် ဘေဘီလေးမှာလည်း ဓာတ်မတည့်မှု ခံစားရနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး ဒီဇင်ဘာ 7, 2020 . 1 min read
မိဘတွေ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ ကလေးတွေအတွက် လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့သလို ခံစားရစေပါတယ်။ အမြဲလိုလို မလုံမလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ စိတ်ထိခိုက်စေပါတယ်။
အရိုးအဆစ်နဲ့ကြွက်သားကျန်းမာရေး, အဆစ်ရောင်ရောဂါများ နိုဝင်ဘာ 25, 2020 .2mins read
ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ကလေးထွားဖို့ အားဆေးတိုက်တာ၊ ထမင်းကျွေးတာထက် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ တပ်မှူးလေးပေါ့။
မိဘများအတွက်လမ်းညွှန်, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 23, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 22, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 19, 2021 .2mins read